CABSAT တွင် Hybrid တိမ်ထုတ်လုပ်မှုကိုပြသရန် Marquis Broadcast | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Marquis အသံလွှင့် CABSAT မှာဟိုက်ဘရစ်သောမိုဃ်းတိမ်ထုတ်လုပ်မှုသရုပ်ပြ
Marquis အသံလွှင့် CABSAT မှာဟိုက်ဘရစ်သောမိုဃ်းတိမ်ထုတ်လုပ်မှုသရုပ်ပြ
မိုဃ်းတိမ်ကိုအခြေခံအဆောက်အဦများ Workflows အသွင်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုပြသနိုင်ဖို့ကုမ္ပဏီ
Marquis အသံလွှင့်က၎င်း၏ထုတ်ကုန်ကို enable ပုံကိုသရုပ်ပြနှင့်တတ်နိုင်သမျှအသစ်ကပိုထိရောက် Workflows အောင်နှင့်ဘဏ်ဍာပြောင်းလဲ, ဟိုက်ဘရစ်စင်-ကစားသောမိုဃ်းတိမ်ထုတ်လုပ်မှုအရှိန်အဟုန်မြှင့်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာရပ်တည်ချက် ZB6-C44 အပေါ်, ဒူဘိုင်း၌ဤလ CABSAT ပြပွဲမှာပြပါလိမ့်မည်။
အမှန်တကယ်အသုံးပြုမှမိုဃ်းတိမ်အကြောင်းပြောနေတာမီဒီယာထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့်မကြာသေးမီကစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ပုဂ္ဂလိကသို့မဟုတ်အများပြည်သူရှိမရှိ - Marquis ယခုတိုက်ရိုက်မိုဃ်းတိမ်ကိုမှပေါင်းစည်းကြောင်းဖြေရှင်းချက်နဲ့လုပ်ငန်းတွေစတင်ဖို့အဌနာလျက်ရှိသည်။ မကြာခဏဒီဟိုက်ဘရစ် Workflows အတူမိုဃ်းတိမ်သည်နှင့်အစဉ်အလာအပေါ်-ရဝုဏ်အဆောက်အဦနှစ်ဦးစလုံးရဲ့အကောင်းဆုံးအောင်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။ လာသောအခါသင့်လျော်သော Marquis အသံလွှင့်ရဲ့အဓိကထုတ်ကုန်ယခု၎င်း၏စီမံကိန်းကားရပ်ရန်နှင့် Workspace ကို Backup ကိုဖြေရှင်းချက်ကိုလည်း SwiftStack နှင့် Azure ထောက်ခံမှုဖြည့်စွက်အတူ S3 နှင့် cloud computing ထောက်ခံပါတယ်။
Project မှကားရပ်ရန်များအတွက်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုရွှေစံဖြစ်လာသည် လွန်စွာလိုလားသော®သိုလှောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှု analytics နှင့်စီမံကိန်းသယ်ဆောင်ရလွယ်ကူ။ အဆိုပါစနစ်အားယခုချောမွေ့စွာ Multi-site ကိုပို့, မိုဃ်းတိမ်ကိုထောက်ခံမှု features လွန်စွာလိုလားသော ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်စံပြလုပ်ငန်းအသွားအလာ။ Project မှကားရပ်ရန်စီမံကိန်းကို analytics, visualization, စီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်သိမ်းဆည်းပေးသည်နှင့်အသုံးပြုမှုများအတွက်ငွေတောင်းခံရန်အဘို့အတန်ဖိုးရှိသော tool ကိုဖွစျနိုငျပါတယျ။ ဒါဟာကုမ္ပဏီများသည်သူတို့ကိုအလွယ်တကူတန်ဖိုးရှိသော ISIS အဖွဲ့သို့မဟုတ် NEXIS သိုလှောင်ရန်နေရာပေါ်ပိုကြီးတဲ့ဝင်လာသောထုတ်လုပ်မှုများအတွက်လမ်းအောင်ဆင့်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုသည်မိုဃ်းတိမ်သိုလှောင်မှုမှစီမံကိန်းများကိုတင်ပို့ဖို့ခွင့်ပြု, ဘဏ်ဍာများ၏စွမ်းရည်ကိုနားလည်ကူညီပေးသည်။
၏အစဉ်အဆက်-တိုးမြှင့်စွမ်းရည် လွန်စွာလိုလားသော shared သိုလှောင်မှုလုံးဝပိုမြန်ကွန်ယက်များ, သာ. ကြီးမြတ်သိုလှောင်မှုနှင့်အစဉ်အဆက်-ပိုမိုမြင့်မားဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာ operating ပိုပြီးတွင်တစ်ပြိုင်တည်း clients များနှင့်အတူ, ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များအသွင်ပြောင်းခဲ့သည်။ Marquis ရဲ့ Workspace ကို Backup ကိုလျှောက်လွှာကိုကူညီနိုငျရှိရာဤသည်ကား, ဒီအစွမ်းထက်ဘေးအန္တရာယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနှင့်စီးပွားရေးဆက်လက်ဖြေရှင်းချက်ယခုပြုလုပ်ရန် cloud storage ထောက်ခံပါတယ်။ အထူးသကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ လွန်စွာလိုလားသော ISIS အဖွဲ့နှင့် NEXIS စနစ်များ, Workspace ကို Backup ကို၏အသေးစိတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကိုအသုံးပြုသည် လွန်စွာလိုလားသော အများဆုံးအရေးပါစီမံကိန်းများကိုသေချာသည် backup လုပ်ထား၏သမာဓိအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုသေချာစေရန်ထားတဲ့ workspace တွေကိုချက်ချင်းများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီသည်မိုဃ်းတိမ်သို့မဟုတ်ဆင့်နှစ်ခုသိုလှောင်မှုအတွက်ဖြစ်စေ, backup လုပ်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်တည်နေရာအတွက်ထုတ်လုပ်မှုမှပြန်လည်ကောင်းမွန်စေနိုင်သည်။
တစ်စက္ကန့် ISIS အဖွဲ့သို့မဟုတ် NEXIS မှ - ဖြစ်ကောင်းတိုင်း 30 မိနစ် - Workspace ကို Sync ကိုလိမ်မာပါးနပ်ထားတဲ့ workspace တွေကိုထပ်တူပြုခြင်း, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတဲ့အဆင့်မြင့်ပေးပါသည်။ ဒါဟာတိုးတက်မှုအတွက်အလုပ်အများဆုံးအရှုံးသာ 30 မိနစ်သေချာ, ထိုကဲ့သို့သောတစ်နိုင်ငံလုံးအခွက်တဆယ်ပြပွဲအဖြစ်အထူးကြပ်မတ်မြန်ဆန် turnaround, ခက်ပေးပို့နောက်ဆုံးနေ့ဘဏ်ဍာများအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ်။ Project မှကားရပ်ရန်, Workspace ကို Sync ကိုနှင့် Workspace ကို Backup ကိုလည်းအတူတူချောမွေ့စွာအလုပ်လုပ်; တဦးတည်းကအရမ်းကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူး Project မှကားရပ်ရန် analytics ကို အသုံးပြု. လည်းအချိန်အရေးပါထပ်တူပြုခြင်း backup လုပ်ထားနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအရှိန်မြှင့်နေတုန်းသိုလှောင်မှုသိသာထင်ရှားသောပမာဏချွေတာခြင်း, Workspace ကို Sync ကိုသို့မဟုတ် Backup ကိုသို့ဝါဒဖြန့်ထပ်နှင့်မိဘမဲ့မီဒီယာတားဆီးလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ "စီမံကိန်းကားရပ်ရန်အဘို့အတိမ်တိုက်ထောက်ခံမှုကြောင့်ရိုးရှင်းတဲ့ပြည့်စုံရွှေ့ဖို့စေသည် လွန်စွာလိုလားသော ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်အခြားမည်သည့်တည်နေရာအတူတကွအပေါငျးတို့သ bins, ပာနှင့်မီဒီယာဖိုင်တွေနဲ့အတူစီမံကိန်းများ, "ခရစ်စတီး, မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ Marquis အသံလွှင့်ကရှင်းပြသည်။ "တကယ်တော့ကျနော်တို့စပ်သောမိုဃ်းတိမ်တိုင်ထုတ်လုပ်မှုဖို့အလွယ်ကူဆုံးအသွင်ပြောင်းဖွင့်ပါတယ်။ "
Medway လည်းအဆင့်မြင့် UHD transcoding နှင့်အတူပါဆုံးအဆင့်မြင့်သောမိုဃ်းတိမ် / မြေပြင် Workflows ခွင့်ပြု, Cloud-enabled ဖြစ်လာသည်။ ရှိမုနျကို Fearn, Marquis အသံလွှင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်မန်နေဂျာသစ်ကိုအကျိုးခံစားခွင့်ကရှင်းပြသည်; "Medway အတူတကွ cloud computing Ultra-အဆင့်မြင့်နှင့်အတူမိုဃ်းတိမ်ကိုပိုင်ဆိုင်မှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း file ကိုပြန်လည်ရယူခြင်းကိုအသုံးပြုသည် လွန်စွာလိုလားသော စီမံကိန်းကို proxy ကိုလင့်ခ်ပြန်ချိတ်။ ဤသည်မည်သူမဆိုကိုဆိုလိုသည်, ဘယ်နေရာမှာမဆို, ထို့နောက် Medway တစ်ဦးမှ proxies ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပြီ, မိုဃ်းတိမ်မှအကြောင်းအရာများ upload နိုင် လွန်စွာလိုလားသော ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်။ ဒါဟာအလွန်ထိရောက်သည့်စနစ်ပါပဲ။ "
ယင်း၏ S100 မိုဃ်းတိမ်ကိုပေးရန်အစီအစဉ်သည်အမေဇုံနဲ့အထူးကြပ်မတ်စစ်ဆေးမှုနှင့် validation ကိုအစီအစဉ်ကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်ဒါကြောင့်အရေးကြီးတာက, Marquis, မိုဃ်းတိမ်ကိုပလက်ဖောင်းရွေးချယ်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ 3% Agnostic ဖြစ်ပါသည် Dell က EMC, Caringo, Cloudian နဲ့ IBM ။ မသာဒီသည်၎င်း၏ဖောက်သည်များအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်, စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ cloud သိုလှောင်မှုအပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှု၏အားသာချက်ယူခွင့်ပြုထားခြင်း, မိမိတို့နှစ်သက်သောရောင်းချသူနှင့်အတူဒါလုပ်နိုင်ပါတယ်။ Marquis လည်းရဝုဏ်-ပေါ်နှင့် In-မိုဃ်းတိမ်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာအတူရိုးရာသိုလှောင်မှုကိုအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုများကိုစပ်သိုလှောင်မှုပတ်ဝန်းကျင်မှာထောကျပံ့ပေးနိုငျသညျ။
Marquis ရဲ့မဟာဗျူဟာတက်ကြွစွာစက်မှုလုပ်ငန်းပြောင်းလဲမှုအားဖွင့်ခြင်းနှင့်အရှိန်မြှင့်, ကိုယ်တိုင်နှင့်၎င်း၏နည်းပညာအသွင်ပြောင်းဖို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထူးခြားကုမ္ပဏီကတစ်ဦးချင်းစီထုတ်လုပ်သူဖန်တီးသူကနေမီဒီယာလုပ်ငန်းတွေများ၏အလွန်အကြီးဆုံးရန်, မိုဃ်းတိမ်ကိုမှနိမ့်ဆုံးအန္တရာယ်ကိုလွယ်ကူရွှေ့ပြောင်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုပေးထားပါတယ်။ ပိုပြီးထွက်ရှာရန်, Marquis အသံလွှင့် CABSAT6သို့မဟုတ်အလည်အပတ်ခရီးမှာ ZB44-C2018 ရပ်သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.marquisbroadcast.com.
Marquis အသံလွှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်မှု Workflows အတွက်မီဒီယာနှင့် metadata ကိုလှုံ့ဆော်ပေး။ 1998 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, ကုမ္ပဏီယနေ့အစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီမီဒီယာထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ၏ဒေတာ-intensive နှင့်စိန်ခေါ်မှုလိုအပ်ချက်များကိုများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲမီဒီယာပေါင်းစည်းမှုထုတ်ကုန်များ၏အကွာအဝေးကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းနှင့်၎င်းတို့၏လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြစ်စဉ်များကနေအများဆုံးထိရောက်စွာအောင်မြင်ရန်ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ၏ထုတ်လုပ်သူများဖွင့်။ Marquis အသံလွှင့်တစ်ဦးအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရ လွန်စွာလိုလားသော2016 အတွက်မဟာမိတ် Partner ®။ ကုန်ကျ-ထိရောက်စွာမှစီမံခန့်ခွဲကမ္ဘာတဝှမ်းအသုံးပြုသော Project မှကားရပ်ရန်, လွန်စွာလိုလားသော သိုလှောင်မှုပမာဏကအသိအမှတ်ပြုထားပြီး လွန်စွာလိုလားသော ယခုတဆင့်ဖြန့်ဝေလျက်ရှိသည် လွန်စွာလိုလားသော'' s ကိုအရောင်းလိုင်းများ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီဘီဘီစီ, Discovery, ITV, PBS, Technicolor ကွန်ယက်န်ဆောင်မှုများနှင့် Turner အသံလွှင့်အပါအဝင်အဓိကထုတ်လွှင့်, များစွာသောမှဖြေရှင်းချက်ပေးထားခဲ့သည်။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ပေါင်းစည်းမှု post ကိုထုတ်လုပ်မှု လှံ & Arrows က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် virtual reality 2017-12-29
ယခင်: Visual ထုတ်လုပ်မှုအထူးကု